OKANYE unodoli oxabiso liphantsi uThengiswe ngoMgangatho oPhezulu oNopopi weSex kwi-Intanethi
Thenga OKANYE Oonodoli bokwenyani ngesondo kwi-Urdolls
umrhumo TPE iidoli ezintandathu ngophawu OKANYE Unodoli ushushu kwintengiso ngoku.
Uphawu: OKANYE Unodoli
Izinto: Iidoll zesini ze-TPE Isitayela: Oonodoli bezesondo baseMelika, iiDoli zeSitayile saseYurophu, iNtloko yeDoli yezesondo, iiDoli zePetite Sex njalo njalo.
Intshayelelo: Olu luphawu olusakhulayo loonodoli besini. OKANYE Unodoli enye ye Iidola zeWM iimpawu. Oonodoli bokwenene bothando baveliswa ngumenzi we-WM. Umgangatho kunye nasemva kokuthengisa kunokuqinisekiswa.
+ Izinto zikanodoli we-TPE weprimiyamu
+ Iindidi ezahlukeneyo zomzimba onokuthi ukhethe kuzo
+ Kufuphi nokuthamba kolusu lwabafazi bokwenyani
+ Ubuso obulungelelaniswe kakuhle kunye nobukhulu bomzimba
+ Gxila koonodoli abaphakathi ukuya phezulu kwisitayile saseYurophu nesaseMelika, kunye ne-makeup egqwesileyo kunye nemifanekiso eqaqambileyo